रु रु जलविद्युतको शेयर दोस्रो बजारमा आजदेखि रू. ३५६ मा कारोबार खुला
वैशाख २०, काठमाडौं । रु रु जलविद्युत् परियोजना लिमिटेडको शेयर कारोबार सोमवारदेखि खुला भएको छ ।
कम्पनीको शेयर रू. ३५६ मा खुला भएको हो । यो समाचार तयार पार्दाको समय ११ : २० बजेसम्ममा पहिलो दिन कम्पनीको १० कित्ता शेयर खरीदविक्री भएको छ । कम्पनीको आईपीओ आइतवार नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज(नेप्से) मा ४० लाख ७७ हजार ५५ कित्ता सूचीकृत भएको हो ।
नेप्सेले कम्पनीको पहिलो कारोबारको लागि मूल्य रेञ्ज रू. ११८ दशमलव ८४ देखि ३५६ दशमलव ५२ तोकेको छ । नेप्सेले पहिलो करोबारको लागि नेटवर्थको तीन गुणासम्म मूल्य रेञ्ज तोक्ने गर्दछ ।
कम्पनीले आईपीओ बाँडफाँट गत वैशाख ३ गते गरेको थियो । ३७ हजार ९१६ जनाले गोलाप्रथा मार्फत १० कित्ताका दरले शेयर पाएका थिए । बाँडफाँट गरेर बाँकी रहेको ७ कित्ता शेयर १० कित्ताभन्दा बढी माग गरी आवेदन दिएका ७ जनाले थप १/ १ कित्ताका दरले पाएका थिए ।
कम्पनीले निष्कासन गरेको आईपीओमा कुल १६ हजार ८३ हजार १२१ जना आवेदकबाट २ करोड ३५ लाख ४६ हजार ४४० कित्ता शेयर खरीदका लागि आवेदन परेको थियो ।
कम्पनीले चैत २० गतेदेखि २४ गतेसम्म आईपीओ निष्कासन गरेको थियो । कम्पनीले प्रिमियसहित प्रतिकित्ता रू. १२० मा सर्वसाधारणमा आईपीओ निष्कासन गरेको हो ।